QR ကုဒ်များသည် Coronavirus • Pageloot ကိုကုသရန်မည်သို့ကူညီနိုင်သည်
QR ကုဒ်များသည်ကုသရန် Coronavirus ကိုကူညီနေပါသလား။
ဒီတော့ဒီအရာကပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ QR ကုဒ်များသည် COVID-19 ဟုလူသိများသော coronavirus နှင့်ပင်အဝေးမှဆက်စပ်သည်ဟုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကထင်မြင်သည်ကိုအဘယ်ကြောင့်တွေးမိသည်ကိုကျွန်ုပ်မရပ်နိုင်ပါ။ QR ကုဒ်များသည် coronavirus ကိုကုသရန်အမှန်တကယ်ကူညီနိုင်ပါသလား။ ငါရိုးသားဖို့, နည်းနည်းသံသယမိပါတယ်။
သင်၏ပေါက်ပေါက်ကိုဖမ်းပြီးအချို့အတွက်အဆင်သင့်လုပ်ပါ စိတ်ကိုသုတ်သင်! တရုတ်အစိုးရသည်လူတို့ကဲ့သို့သောလူများကိုသိုးတစ်ကောင်နှင့်တံဆိပ်ကပ်နေသည်ကိုသင်သိပါသလား QR code generator? ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုပုံမှန်ပုံစံသစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါသလား။
ဒီအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာလဲ။ ကျနော်တို့အိမ်မှာထိုင်ပြီးနောက် ၂-၆ လလောက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကတကယ်ကိုပျော်စရာမကောင်းဘူး။ သတင်းကောင်းသည် QR ကုဒ်များကိုကူညီရန်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကယ့်ကိုသော်လည်းဘာမှကုသနိုင်ပါသလား? ရှာတွေ့ဖို့နည်းနည်းနက်ရှိုင်းတူးကြရအောင်။
ဤသည်ထူးဆန်းလှည့်ကွက် - Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုကိုခြေရာခံရန်တရုတ်သည် QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုသည်
ဒီရောင်စုံ pixelated ကုဒ်သုံးခုဘာတွေလဲ။ တရုတ်ရှိသည် သူတို့စိတ်ပျက်သွားတယ် သို့မဟုတ်သူတို့ကအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘဲလိမ္မာပါးနပ်သောအရာတစ်ခုခုမှတက်ရှိပါသလဲ
ဗိုင်းရပ်စ်သည်အရူးအမူးစွဲလမ်းနေသော်လည်းတရုတ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်သို့ပြန်လှည့်လာကြပြီဖြစ်သည်။ ထူးဆန်းသည်မှာမိုဘိုင်းဖုန်းများသည် coronavirus ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုခြေရာခံရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်ဟုထင်ရသည် QR codes တွေကိုဖန်တီးခြင်း.
ယခုတရုတ်မြို့ကြီးများသည်လူတို့အား QR ကုဒ်များကို အသုံးပြု၍ သူတို့ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေမရှိကြောင်းသက်သေပြရန်စတင်ခဲ့သည်။
ဒီ app ရှိပါတယ် Alipay ကျန်းမာရေး။ လူတွေကို tag လုပ်ဖို့အရောင် ၃ ရောင်ကိုသုံးတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏လူမှုရေးအဆင့်အတန်းဖြစ်ပြီးသင်အပြင်ထွက်ခွင့်ပြု၊ ဤကဲ့သို့သောရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိမြို့ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကိုအမှန်တကယ်ကူညီရာရောက်ပြီးရလဒ်များမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
အစိမ်းရောင် QR သင်္ကေတများရှိသူများသာဘေဂျင်းရှိမြို့တစ်မြို့သို့လှည့်လည်သွားလာနိုင်သည်။ အဝါရောင်ဆိုတာဆိုလိုတာကမင်းကခုနစ်ရက်ပတ်လုံး Lockdown ရမယ်။
ဒီအက်ပ်ကိုတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ် WeChat။ လူတိုင်းသည်မျက်နှာဖုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်များမှတဆင့် ၄ င်းတို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်ကုဒ်နံပါတ်ရနိုင်သည်။ အဓိကအချက်မှာလူတိုင်း၌ရှိသည် သူတို့ရဲ့ QR ကုဒ်တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ သူတို့မရွှေ့နိုင်မီအတည်ပြုချက်ပေးရန်။
အရမ်းနောက်ကျလွန်းပြီ - QR ကုဒ်များသည် COVID-19 ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သလား။
QR ကုဒ်တွေဟာတကယ်ထိရောက်တယ် လူတွေကိုသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးကိုစောင့်ရှောက်ကူညီခြင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သင်၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးသင့်သည် QR code စကင်နာကိရိယာ။ အကောင်းဆုံးသူများသည်မီတာအနည်းငယ်အကွာအဝေးမှပင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
အခြားသူများနှင့်ဝေးကွာနေစဉ်နှင့်အခြားအရာများအားဝေမျှနိုင်စဉ်မိမိကိုယ်ကိုအခြားသူများနှင့်ဝေးကွာစေရန် QR ကုဒ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးသောစိတ်ကူးများကိုစာရင်းပြုစုချင်ပါသည်။
သင်၏ Wifi Login ကိုမျှဝေပါ
Wifi စကားဝှက်တွေဝေမျှတဲ့အခါမှာ router label အောက်မှာရှာဖွေရတာအရမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ လူနှစ် ဦး စလုံးတွင် iPhone မရှိသောအခါသင်၏ Wifi login ကိုလက်ဝေမျှနိုင်သောနည်းလမ်းရှိလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
ကံကောင်းတာကအလုံအလောက်, သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် သင်၏ Wifi login ကိုမျှဝေရန် QR ကုဒ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ အလွယ်တကူ ဒီကုဒ်နံပါတ်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်မှတိုက်ရိုက်ပြသနိုင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးသို့သွားသောလမ်းတွင်လား။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုငါဆုတောင်းတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မင်းသေချာတာပေါ့ မည်သည့်စီးပွားရေးကဒ်ပြားလဲလှယ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ အလားအလာဆောင်နှင့်ဖောက်သည်အတူ။ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းမှာအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် vCard QR code generator သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်ကိုမျှဝေရန်။
သင့်ဖုန်းမှ QR ကိုသာပြသပြီးအခြားသူများကိုမှန်ကန်စွာအကွာအဝေးမှကြည့်ရှုစေပါ။
ငွေ၊ ဒင်္ဂါးများနှင့်စက္ကူပိုက်ဆံ - Coronavirus စတင်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်ဤအရာများကိုပိတ်ပင်သင့်သည်။ သင်စဉ်းစားသောအခါ - စက္ကူဥပဒေကြမ်းသည်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်မည်မျှလက်တွေ့သနည်း။ အဲဒီမှာဗိုင်းရပ်စ်ခြေရာခံနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကဘာလဲ။
ဒေါ်လာ၊ ယူရိုမှ Bitcoin နှင့် Litecoin မှမည်သည့်အရာ၊ QR ကုဒ်များသည်ဤနေရာတွင်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ကြိုးမဲ့ငွေပေးချေမှုသည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပါကဤအရာကိုစစ်ဆေးပါ Cryptocurrency QR ကုဒ်မီးစက်
သင့်ဖုန်းတွင်လျောက်ပတ်သောကင်မရာရှိပါကသင်အစကောင်းပါသည်။ သို့သော်သင်၏ဖုန်းသည် QR ကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းမရှိပါကအသို့နည်း။ သင်aကိုသုံးနိုင်သည် အခမဲ့ online QR ကုဒ်နံရံကပ်ကိရိယာ။ ထို့အပြင်သင်၌ရှိသောအကျိုးကျေးဇူးရှိသည် သင်၏ QR ကုဒ်ကိုနောက်မှသိမ်းဆည်းသည်.
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကသင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခဲ့သောနောက်ဆုံး QR ကုဒ်ကားအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်ကူးစက်ခြင်းခံရနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုနောက်တခါထွက်ခြင်းနှင့်မထိုက်တန်ပါ။
အဓိကအချက် - ၎င်းကိုလုံခြုံအောင်ကစားပါ
ကာကွယ်ဆေးသို့မဟုတ်ကုထုံးမရှိသေး သ၍ ယခုအချိန်အထိအကောင်းဆုံးကစားနည်းမှာလူမှုရေးအရဝေးကွာသွားစေရန်အားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာအရာရာကိုမျှဝေရတာနဲ့တူနေတုန်းပဲ။ လူတွေအားလုံးကြောင့်ပဲ။ အချက်အလက်များကိုအဝေးမှမျှဝေခြင်းအတွက် QR ကုဒ်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်လုံးဝမတူပါ။
Pageloot မှကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှ - လူတိုင်းလုံခြုံစွာနေနိုင်ပြီးဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော QR ကုဒ်များ (စိတ်ကျေနပ်လောက်သောအကွာအဝေးကိုစိတ်ထဲထားရှိခြင်း) ကို ဆက်လက်၍ စကင်ဖတ်နေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
QR Code ကိုလေ့လာပါ ခြေရာကောက် & Analytics
QR ကုဒ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်နိုင်ခြေများ
ဘာလဲ dynamic QR Code ကို